Uru bara ụba na Beirut Hotels dị ka ọchịchọ na-aga nke ọma na Q1 2017
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Industrylọ Ọrụ Ọbịa » Uru bara ụba na Beirut Hotels dị ka ọchịchọ na-aga nke ọma na Q1 2017
Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Lebanon • News • Mmelite nke Njem njem
Nwere ike 11, 2017
Hotels na Beirut, Lebanon nwere mmalite siri ike na afọ, na-edekọ 21.0 pasent kwa afọ na-abawanye uru kwa ụlọ na Q1 2017, nke dị na azụ nke mmụba 7.2 pasent na RevPAR, dị ka Lebanon nabatara gọọmentị ọhụrụ.
Uzo elu nke ulo elu na hotels na Beirut na March bu isi nke 10.1 pasent nke onu ogugu na onu ogugu n'ime ulo, nke mere ka onu ogugu 17.1 na RevPAR, rue $ 73.38.
N'agbanyeghi mmụba nke 2.9 na Overheads, ụlọ oriri na ọ hotelsụ inụ na Beirut dekọtara nke ọma pasent 49.5 na uru kwa ụlọ maka ọnwa ahụ, nke nyere aka na 21.0 pasent abawanye na nke a maka Q1 2017, na-egosi mmalite siri ike na afọ .
Na $ 24.73 na ọnwa iri na abụọ rue Machị 12, uru kwa ụlọ na Beirut họpụtara na-anọchi anya elu na afọ ndị na-adịbeghị anya ma ya na mmụba nke 2017 ugboro karịa ọnwa 4.5 gara aga, site na $ 36 n'otu oge ahụ na 4.45/2013.
A na-enweta ụlọ oriri na nkwari akụ ndị a na-akọ na akụkọ a site na nchekwa data HotStats ma gosipụta pọtụfoliyo na nkesa nke usoro ụlọ oriri na nkwari akụ nke anyị nyochara na nke na-arụ ọrụ na ngalaba anọ na ise.
A na-enyocha ihe nlele data ahụ ma na-agbanweghachi kwa afọ iji gosipụta mgbanwe ndị dị na nyocha nyocha nke HotStats. N'ihi nke a, oke arụmọrụ ndị e bipụtara n'afọ gara aga nwere ike ịdị iche na ndị dị n'ime akụkọ a na HOT STATS.